Inty sy Nday : Nanompo ny fanjakana daholo ny mpanao politika
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Inty sy Nday : Nanompo ny fanjakana daholo ny mpanao politika
Nangina tanteraka ny tontolon’ny politika amin’izao fotoana izao. Ny mpitondra fanjakana tsy nisy ho tenenina sy hatolotra ny vahoaka intsony. Ilaozan’ny filoham-pirenena mamangy amin’ny toby lehibe sisa no andaniana andro. Lany ny asa tokony hatolotra ny vahoaka ka tsy misy zavatra hotokanana intsony. Zara aza mba nisy ireny toby ireny mba hahazoana miseho vahoka. Tsy misy tetika hampandrosoana ny firenena intsony. Ny fivoriam-be ataon’ny mpivavaka ireny sisa no mba ahazoana miseho vahoaka na dia tsy mandinika ny fampandrosoana ny firenena fa mijanona amin’ny finoana fotsiny ihany. Mahagaga ny antony andehanany any amin’ny tobin’ny fiangonana Loterana tany Ankaramalaza nefa ity filoham-pirenena dia zanaka pasitera amin’ny FJKM (Fiangonana’ny Jesoa Kristy eto Madagasikara). Mazava hoazy noho izany fa tsy resaka finoana velively no dian’ity filoham-pirenena ity tany Ankaramalaza fa politika fotsiny ihany. Tsy mahagaga izany satria efa akaiky ny taona 2018 ka misarika ny olona hifidy azy indray. Raha ny toby any Ankaramalaza ity no asian-teny dia toerana fitsaboana ny olona marary isan-karazany koa, ka isan’ny mampiavaka amin’izany ireo izay marary saina. Tsy izay ihany fa afaka manome fankaherezana ireo olona manana olana aram-piainana sy aram-piarahamonina ny ao Ankaramalaza.
Fa tena nandiso fanantenana ny vahoaka koa ireo milaza azy fa mpanao politika mpanohitra fanjakana. Maro dia maro izy ireo. Tao anatin’ny telo taona izay nanjakan’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay dia tsy hay tenenina intsony ny fanambarana fa tsy mpomba io fanjakana io izy ireo. Filoham-pirenena tsy manaraka lalàm-panorenana io Hery Rajaonarimampianina io hoy ihany izy ireo manao angoan-teny. Tsy vitan’izany fa nolazaina fa mpanao kolikoly sy mpanodinkodina ny harem-pirenena ary mpivarotra tanindrazana. Hatramin’ny fihetsikin’ny vadin’ny filoham-pirenena dia notsikeraina avokoa fa manao izao sy izatsy.
Navelan’ingahy Hery Rajaonarimampiana nanao angoan-teny izy ireny fa tsy noraharahiany. Ingahy Lylison ihany no nogadrainy tamin’izany ary natahorany mafy. Ny sisa rehetra dia tsy nisy dikany teo anatrehan’ny filoha na dia namory vahoaka aza.
Amin’izao fotoana izao dia nangina avokoa ny mpanohitra eto Madagasikara. Nanaiky tanteraka ny fanjakana HVM (hery vaovaon’i Madagasikara ) avokoa izy rehetra ireo ny niafarany. Efa maro amin’izy ireo no manomana ny fifidianana amin’ny taona 2018 io. Efa mitangorona sy mifampitarika etsy sy eroa izy ireny ankehitriny manomana izany fifidianana izay ho filoham-pirenena izany. Izany no ilazana fa nanompo an’ingahy Hery Rajaonarimampianina daholo ny mpanao politika eto Madagasikara. Nanaiky ny heviny sy ny nanatanteraka izany ka tsy nisy namory olona sy nanakiana intsony. Ny mpanao politika mpanohitra sasany aza dia tsy mahasahy miseho vahoaka intsony. Mandositra mpanao gazety ary tsy mety milaza ny heviny intsony fa aleon’izy ireny hono mangina fa tsy fotoanan’ny fifamaliana izao. Aiza koa no hisy mpanao politika hangina izany nefa? Midika faharesena tanteraka ny fahanginana ao amin’ity sehatra ity izao. Izany koa no atao hoe “lany jijy”, tsy misy hapoaka intsony.
Dia nangina tanteraka ny mpanao politika ka nangina koa ny firenena. Resin’ ny mpitondra fanjakana ireto milaza azy ho mpanohitra ka ny niafarany dia izao lasa nanompo ny mpitondra fanjakana izao. Misy aza ireo izay efa mangataka any amin’ity fanjakana ity ankehitriny izy ireo, ka raha tsy mitady vola dia miangavy toerana.